नेपालका ७ हजार ५०० सार्वजनिक स्थलमा फ्रि-वाइफाइ सेवा - News Bihani
बिहिवार, कार्तिक ६ २०७७
# सांसद र पिएलाई दसैँ भत्ता
नेपालका ७ हजार ५०० सार्वजनिक स्थलमा फ्रि-वाइफाइ सेवा
शुक्रवार, आश्विन २३ २०७७
काठमाडौं । फेसबुकले नेपालमा ‘एक्सप्रेस-वाइफाइ’ सेवा सुरु भएको घोषणा गरेको छ । इन्टरेनट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकसँगको सहकाय गर्दै फेसबुकले नेपालका ७ हजार ५०० स्थानमा निःशुल्क एक्सप्रेस वाइफाइ थालेको बताएको हो ।
बिहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा वर्ल्डलिंकले नेपालका सार्वजनिक स्थानमा यस्ता सेवा उपलब्ध हुने बताएको छ ।
फेसबुकले यस्तो वाइफाइ सेवाका लागि अन्य देशमा रहेका स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गर्छ । एसियामा छनोट भएका भारत र नेपालमा फेसबुकले यसप्रकारको सेवा थालेको छ । सस्तो, भरपर्दो र उच्च गतिको सार्वजनिक वाइफाइ प्रदान गर्न दुई कम्पनीबीचको सहकार्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दावी गरिएको छ ।
यो सेवाका लागि वर्ल्डलिंकलाई फेसबुकले पूर्वाधासहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउनेछ । अब निःशुल्क वाईफाईका लागि एक्सेस प्वाइन्ट, नेटवर्क र ब्यान्डविथ कम्पनीको भएपनि फेसबुकले सफ्टवेयर प्लेटर्फम उपलब्ध गराउनेछ ।
अब पहिलेजस्तो एकपटक नेटवर्कमा कनेक्ट भएपनि पटक-पटक कोड राखेर कनेक्ट हुनपर्ने छैन । यसरी कम्पनीले १५ मिनेटदेखि दुई घण्टाको सीमा तोकेर निःशुल्क वाइफाइ सुविधा दिनेछ । तोकिएको अवधि सकिएपछि फेरि कनेक्ट गर्न सकिनेछ ।
वर्ल्डलिंकका सीईओ केशव नेपालले फ्रि वाइफाइ सेवा यसअघिबाटै दिइँदै आएपनि अब फेसबुकसँगको सहकार्यबाट सेवा प्रभावकारी बन्ने बताएका छन । कम्पनीले हाल देशभर १० हजार स्थानमा सार्वजनिक वाईफाई उपलब्ध गराइरहेको छ ।
फेसबुकका ग्रोथ म्यानेजर अमित सिंहले फोरजी नेटवर्कमा यस्ता सेवाले चाप घटाउने बताएका छन । उच्च गतिको इन्टरनेट सेवका पाउन एक्सप्रेस वाइफाइले सघाउने उनको भनाइ छ । यो सेवाका लागि फेसबुकले वर्ल्ड लिंकलाई क्लाउडमा आधारित सफ्टवेयर सिस्टम उपलब्ध गराएको छ ।
वर्ल्डलिंकका प्रबन्ध निर्देशक दिलीप अग्रवालले सुरुआतबाटै कम्पनीले जनतालाई अनेकन किसिमबाट स्तरीय सुविधा दिन खोजको बताएका छन । सरकारले आईएसपीलाई छुट्याएको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराए कम्पनीले डाटा सेवा पनि थाल्ने बताएका छन ।
अब फेसकुकको सफ्टवेयर सिस्टमबाट सार्वजनिक वाइफाइ सेवा अझ प्रभावकारी बन्ने उनको दावी छ ।
शुक्रवार, आश्विन २३ २०७७१०:५९:१६
जनताले उपचार नपाउने तर सांसदको उपचार खर्च २०० प्रतिशतले बढ्यो
युवतीलाई आकर्षित गर्न यी ६ तरिका अपनाउनुहोस् !
जनता समाजवादी पार्टीको संघिय परिषद एकल अध्यक्षमा डा.बाबुराम भट्टराई
संसद्को गरिमा : पहिले भन्सार छुटको पजेरोले कुल्चियो, अहिले दसैँ भत्तामा अल्झियो
एप्पलले सार्वजनिक गर्‍यो आइफोन–१२, मूल्य कति?
माइक्रोसफ्टका कर्मचारीले स्थायी रुपमै घरबाट काम गर्न पाउने
नयाँ आइफोनको पर्खाइमा रहेका एप्पलका फ्यानहरुका लागि खुसीको खबर
तपाइको वाइफाई नचलेर हैरान हुनुभएको छ ? छिटो बनाउन यसो गर्नुहोस्!